Translate Mongolian to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Mongolian to Myanmar (Burmese), Mongolian to Myanmar (Burmese) translations, Mongolian to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Сайн байна уу, чи яаж байна မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Хэн нэгэн бий юу? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Би чамд маш их хайртай ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Энэ гамбургер ямар үнэтэй вэ? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Та намайг таксигаар дуудаж болох уу? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Намайг уучлаарай ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Би сонирхож байна ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Миний нислэг хойшлогдов အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Би энд бизнесийн төлөө байна ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Сайн уу миний нэрийг မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Намайг уучлаарай, гэхдээ би гэрлэсэн ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Би танаас асуумаар байна ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Нисэх онгоцны буудалд хүргэж өгөх үү? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Яг одоо цаг хугацаа гэж юу вэ? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Хамгийн ойрын цагдаагийн газар хаана байдаг вэ? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Би утасны цэнэглэгчээ зээлээр авах уу? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Та надад тусалж чадах уу? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Намайг уух уу? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Хэр их үнэтэй вэ? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Би gluten-ийн харшилтай байна ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Эмчийг дууд ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Эмч байдаг уу? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Би залгах боломжтой юу? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Намайг даргадаа дуудаарай. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Энэ газар маш сайхан ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Намайг зочид буудалд хүргэж өгнө үү ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Миний өрөөний тоо хэд вэ? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?